Waa maxay Xaqiiqada Virtual? | Martech Zone
Waa maxay Xaqiiqada Virtual?
Saturday, May 19, 2018 Friday, May 18, 2018 Douglas Karr
Dardargelinta tiknoolajiyada waa neef qaadasho. Haddii aad i weydiin lahayd ra'yigayga ku saabsan xaqiiqda dhabta ah sanad ka hor, waxaan u maleynayaa inaan kuu sheegi lahaa inay fursad yar u heshay waxbarashada iyo madadaalada. Si kastaba ha noqotee, sidaan ku sheegay qoraal dhawaan ka dib ka soo qaybgal Dunida Teknolojiyada ee Dell, markaan arko isbeddelka dijitaalka ah ee adduunka ka dhacaya ayaa beddelaya aragtidayda ku saabsan wax walba.
Xaqiiqada Virtual (VR) waa khibrad aad u fara badan halkaasoo adeegsadaha aragtidiisa maqal iyo maqalba lagu bedelay khibrado soosaarid ah. Taabashada qalabka xabaashka waa lagu dari karaa, urta urta, iyo heerkulka sidoo kale waa la sii wanaajin karaa. Ujeeddadu waxay tahay bedelo adduunka jira oo adeegsaduhu rumaysan yahay inay ku jiraan jilitaanka is-dhexgalka ee lagu abuuray aaladahaan.
Dardargelinta ayaa ku dhaceysa iyadoo lagaashanayo sirdoonka macmalka ah - nidaamyada waxay baran karaan inay buuxiyaan meelaha banaan ee uusan weli taaban hanaanka horumarineed. Waxaan la wadaagay sheeko aan caadi aheyn halka McLaren jilitaanku wuxuu ahaa mid sax ah in saadaasha ay sameeyeen jilaayaashoodu ay ahayd mid sax ah oo loo adeegsaday diyaarinta iyo hagaajinta gawaarida tartanka. Taasi waa gabi ahaanba wax la yaab leh reality xaqiiqda dalwaddii ee saadaalinaysa xaqiiqda dhabta ah. Yaa.
Fullestop baaray oo horumariyay Xaqiiqada Virtual waxayna soo saartay infographic soo socda. Fullestop wuxuu ku takhasusay naqshadeynta websaydhka gaarka ah iyo horumarka adduunka oo dhan. Naqshad u sameynta ganacsiga leh baahiyo gaar ah. Infographic wuxuu bixiyaa halka VR xitaa lagu dabaqay fursadaha suuq-geynta oo leh natiijooyin wanaagsan:
Marriott waxay siisay adeegga qolka VR oo leh kaararka VR, oo saameyn ku yeeshay tirada dadka sheegaya inay jeclaan lahaayeen inay sii joogaan hudheelada Marriott.
Ujeedada British Columbia wuxuu abuuray khibrad VR ah oo loo yaqaan 'Great Bear Rainforest' taasoo keentay 5% kordhinta booqdayaasha.
Thomas Cook wuxuu u fidiyay VR flyovers of Manhattan Skyline taasoo keentay 190% kororka dalxiisyada NYC iyo 40% dib ugu soo laabashada maalgashiga.
Ma yaraynayso, sidoo kale. Kharajka VR waxaa laga yaabaa inuu gaaro $ 7 bilyan sanadkan inta udhaxeysa qalabka iyo softiweerka wuxuuna kori karaa ilaa $ 30 bilyan sanadka 2020. Waxaa jira 188 VR headets oo laga heli karo Amazon iyadoo Oculus Rift qiimeeyay mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waxaan daawaday gabadhayda oo dhawr ciyaarood ku ciyaaraysa Oculus Rift system oo lagu daray an Nidaamka Alienware Area 51 oo waxay ahayd wax qurux badan oo la yaab leh in la arko sida ugu dhakhsaha badan ee ay uga dhex muuqatay khibrada.
Hubi faahfaahinta faahfaahinta faahfaahinta warshadaha kale iyo fursadaha Xaqiiqda Virtual. Way sii fiicnaanaysaa!
Tags: alienwareaagga shisheeyaha 51halka loo socdo ingiriiska columbia vrweyn bear keyforest brmanhattan vrsuuq geynta vrmarriott vrfeeraha oculusthomas kariin vrxaqiiqada dalwaddiisuuq geynta vr
Douglas Karr Saturday, May 19, 2018 Friday, May 18, 2018
Xaqiiqdii Ma Tahay La-Taliyaha Warbaahinta Bulshada?
Tixraac: Maamulka iyo Waxsoosaarka dukumintiyada, bandhigyada iyo emayllada